Warbixin Xasaasiya:Mid ka mida Raggii ka dambeeyay Afduubka Haweenkii Somalida oo la qabtay+Sidii looga soo badbaadiyey Haweenaydu afduubka u haystay | Saxil News Network
Warbixin Xasaasiya:Mid ka mida Raggii ka dambeeyay Afduubka Haweenkii Somalida oo la qabtay+Sidii looga soo badbaadiyey Haweenaydu afduubka u haystay
Mid ka mida Raggii ka dambeeyay Afduubka Haweenkii Somalida oo la qabtay+Sidii looga soo badbaadiyey Haweenaydu afduubka u haystay
Booliiska Kenya ayaa soo xiray mid ka mid ah raggii ka dambeeyay “afduubka” gabdhaha Soomaalida dhowaan loogu geystay magaalada Nairobi ee caaismadda Kenya.
Eedeysanaha oo 24 jir ah ayaa la sheegay inuu ka tirsanaa burcaddii afduubatay Xafsa, ayaa la soo qabtay booliiska ayaana su’aalo weydiinaya.
Booliiska ayaa ku raad jooga raggii kale ee burcadda ka tirsanaa.
Muuqaal naxdin leh oo laga soo duubay Xafsa ayaa lagu arki karay iyada oo wejigeedu bararan yahay isla markaana qoyskeeda ka bayeysa inay lacagta bixiyaan si ay nafteeda u badbaaddo.Xafsa ayaa haatan lagu daweynayaa isbitaalka.
Xafso Maxamed Luqmaan
Booliska Kenya ayaa sheegay in saaka ay ku guuleysteen inay soo badbaadiyaan gabadh maalmihii lasoo dhaafay maqneyd oo lagu afduubtay Nairobi.